के तपाईलाई बिर्सने बानीले सताएको छ? अपनाउनुहोस् यी उपाय – Health Post Nepal
२०७८ असोज ६ गते १९:३२
जेष्ठ नागरिकमा हुने विभिन्न समस्या मध्ये एक समस्या हो अल्जाइमर। ६५ वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिमा अल्जाइमर रोग देखिन्छ।
जति उमेर ढल्कँदै जान्छ, अल्जाइमर रोग पनि बढ्दै जान्छ। ८० वर्ष माथिको जेष्ठनागरिकको जनसंख्यामा हेर्ने हो भने लगभग ४० प्रतिशत मानिसमा यो रोग देखिन्छ।
नेपालमा अल्जाइमरको यकिन तथ्यांक नभए पनि विभिन्न अनुमानका आधारमा सन् २०१५ सम्ममा ७८ हजार विरामी छन्।
यो संख्या अझै बढ्दो क्रममा छ। अबको ३० वर्ष, सन् २०५० सम्ममा दुई लाख जेष्ठ नागरिकहरु अल्जाइमरको सिकार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो रोगको जोखिम बढ्ने विभिन्न कारणहरु छन्।
युवा अवस्थाको बानी व्यवहारबाट नै यो रोगको जोखिम बढ्दै जान्छ। हामी सबै बुढो हुन्छौं र उमेरलाई चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं। तर, युवा अवस्थामै हाम्रा बानीहरु सुधार्न सकियो भने यो रोग नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ।
हामीलाई उमेरसँगै उच्च रक्तस्राव छ। अनियन्त्रित मधुमेह, डिप्रेशन, मानसिक तनाब, एन्जाइटि छ भने पछि गएर अल्जाइमर रोग लाग्न सक्छ। यी कुराहरुलाई वयस्कमै नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने, समाज घुलमिलमा रमाउन सक्यौं भने केही हदसम्म यो रोग हुनबाट वा न्यूनिकरण गर्न सक्छौं।
डा. रमेश कडेंल
यो रोगको प्रारम्भीक लक्षण के हुन्?
भर्खरका कुराहरु बिर्सने, तर कुनै अवस्थामा पुराना कुराहरु याद आउन पनि सक्छ। जस्तै, भर्खर खाएको, मानिसलाई भेटेको, कुराहरु बिर्सने हुन सक्छ।
यो दीर्घ रोग भएका कारण विस्तारै जोखिमहरु बढ्दै जान्छ। यो रोग बल्झिदै जाँदा कतिलाई मानसिक समस्या पनि देखिन्छ।
वृद्दअवस्थामा विर्सन थाले भने यो रोग हुनसक्ने भनि बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै, उमेर ढल्दैमा सबैलाई यो रोग हुँदैन। तर युवा अवस्थामै विभिन्न रोग भएकाहरुलाई पछि गएर अल्जाइमर रोग देखिन्छ।
यो रोगको उपचार सम्भव छ?
आज भन्दा १५ वर्ष अघि यो रोग पनि छ भन्ने जानकारी नै थिएन। पछि विस्तारै जनचेतना र मानिसको स्वास्थ्य प्रतिको सचेतना बढ्न थालेपछि बुझ्न थालेका छन्।
यस रोगको उपचार सम्भव छ। प्ररम्भिक अवस्थामा यो समस्या पत्ता लगाउन सके वा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लान सकियो भने यो रोगको प्रभावकारी उपचार सम्भव छ।
यो दीर्घ रोग हो। यो रोग पूर्णरुपमा निको नहुने रोग हो तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले जेष्ठ नागरिकमा यो रोग देखिए घरमा मात्र राख्नु हुँदैन, उपचार प्रक्रियामा लानुपर्छ। यसले वृद्धहरुलाई मात्र नभई हेरचाह गर्नेलाई पनि सहज हुन्छ।
नेपाल सरकारले यो रोगको उपचारका लागि विभिन्न अस्पताललाई सूचिकृत गरेको छ। ती अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा एक लाख बराबरको उपचार सुविधा रहेको छ भने स्वास्थ्य बिमाबाट पनि यो रोगको उपचार गराउन सकिन्छ।
(जेष्ठ नागरिक विशेषज्ञ डा. रमेश कडेंलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे प्रेस व्रिफिङमा गरेको कुराकानीमा आधारित)